Baarlamanka Puntland oo ka hadlay Xiisadaha colaadeed ee ka jirya Gobolka Karkaar. – SBC
Baarlamanka Puntland oo ka hadlay Xiisadaha colaadeed ee ka jirya Gobolka Karkaar.
Xildhibaanada Baarlamanka Dowlada Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay Dagaalada mudooyinkii ugu dambeeyay ku dhexmarayay Gobolka Karkaar laba beel oo halkaasi wada dega.
Kulan saxaafadeed ay maanta ku qabteen Xarunta Baarlamanka Puntland ee Magaalada Garoowey waxay Xildhibaanadu ku sheegeen in ay si aad ah uga xunyihiin dagaalada ka dhacaya qeybo ka mid ah gobolka iyagoona u jeediyay dhinacyada dagaalamayaa Baaq ah in si deg deg ah ay u joojiyaan dirirta .
Xildhibaan Cusmaan Xasan oo ka mid ah xildhibaanadii ka hadashay shirka jaraa’id ayaa ugu baaqay labada dhinac ee dagaalamaya iyo weliba waxgaradkoodu ay si deg deg ah u joojiyaan dagaalada dhacaya.
Waxaa uu sidoo kale ka codsaday Dhanka dowlada talaabo sharciga waafaqsan in ay ka qaadaan dhinacyada dagaalada wada .
Xildhibaan Yuusuf Saalax Samatar aya isagana dhankiisa ugu baaqay labada beel ee dagaalamaya in ay dagaalka joojiyaan islamarkaana ay qaataan nabada isuguna yimaadaan wada hadal xalkeeda halkaasi ku gaaraan.
“Waxaan ugu baaqeynaa Labadaasi beelood ee walaalaha ah in dagaalada dhexmaraya ay joojiyaan, Ilaahey unoqdaan, gartaana faa iidada Nabada iyo isdhexgalka bulshada” ayaa hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaan Yuusuf Saalax.
Sikastaba ha ahaatee baaqyada laga dirayo dagaalada ka dhacay Degmada Rako ee gobolka Karkaar ayaa noqonaya kuwo isa soo taraya, islamarkaana loogu sheegayo labada dhinac ee ismaandhaafsan in ay ka tanaasulaan dagaal iyo colaad qaataana nabad.